Furitaanka ciyaaraha adduunka - BBC News Somali
Furitaanka ciyaaraha adduunka
11 Juunyo 2010
Koobka adduunka ee South Africa, 2010, ayaa ka furmay magaalada Johannersburg, iyadoo ay dhacday xafladda furitaanka, oo ay ka soo qaybgaleen kumanaan qof, iyadoo la filayo ilaa 94 kun oo daawade in ay ka qaybgalaan ciyaarta ugu horaysa ee furitaanka.
Kumanaan taageerayaal ah, ayaa isugu tagay garoonka ciyaaruhu ka furmayaan si ay u daawadaan ciyaarta South Africa iyo Mexica, oo bilaabanaysa 1500 saacadda London, ama 5ta galabnimo ee saacadda Africada bari.
Waa tartankii 19-aad ee ciyaaraha adduunka, waxaana markii ugu horaysay ee lagu qabto qaaradda Africa.
Nelson Mandela, ayaan ka qaybgali doonin furitaanka, iyadoo ay gabar yar oo uu wiilkiisu dhalay, Zenani Mandela oo 13 jir ahayd, ay shil baabuur ku dhimatay xalay, iyadoo ku soo jeedda xafladda furitaanka ciyaaraha adduunka.
Image caption Nelson Mandela iyo qoyska Zenani Mandela
Ciyaaraha adduunka sanadkan, waxaa lagu furay xaflad 40 daqiiqo soconaysa oo ka dhacay magaalada kubadda cagta, oo ku bilaabatay diyaarado miigag ah oo dul maray garoonka ciyaarta.
Waxaa xafladda ka heesaya fanaaniin badan oo caalami ah.
Madaxwaynaha South Africa, Jacop Zuma iyo Archbishop Desmond Tutu, ayaa soo xirta calmaado muujinaya taageerada ay u hayaan kooxda matalaysa dalka Koonfur Africa ee Bafana Bafana.
Ciyaaraha adduunka ee maanta bilaabanaya waxay soo dhamaanayaa 11-ka bisha June, 2010, waxaana ku tartamaya ilaa 32 koox oo caalamka oo dhan ka kala yimid.